Qeybo kamid ah Soomaaliya oo Internet-ka ka maqan | KEYDMEDIA ONLINE
Qeybo kamid ah Soomaaliya oo Internet-ka ka maqan
Sanadkan gudahiisa waa markii labaad oo Internet la’aan ku dhacdo Koonfurta Soomaaliya, iyadoo midii hore lagu soo beegay xil ka qaadistii Xasan Cali Khayre July 2020, si dadka dareenkooda loo weeciyo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirkadaha bixiya adeegga Internet-ka ayaa maanta ku waregliyay macaamiishooda inay cilad jirto, islamarkaana aysan ogeyn waqtiga ay ku qaadan doonto in lagu xalinayo.
Internet la’aanta ayaa saameyn ku yeelatay Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyadoo khasaaro xoog leh gaarsiiyay dhaqaalaha iyo waxbarashadda, maadaama ay ku tiirsanaayeen shaqooyinka maalinlaha.
Dad badan ayaa siyaabo kala duwan u sababeeyan Internet-ka maqan, iyagoo qaarkood aaminsan in si kutala-gal ah loo jaray, islamarkaana aysan jirin wax cilad ah. Warar ayaa sheegaya in shirkaddaha lagu amaray inay sidaas sameeyaan.
Shacabka Muqdisho ayaa saameynta ugu badan uu ku yeelanayaa maqnaanshaha adeegga internet-ka haddii uu sii socda, waxaana gebi ahaanba joogsan doono adeegyo badan oo qadka internet-ka ku xiran.
0 Comments Topics: internet muqdisho soomaaliya waxbarashada